भोजपुरका ३ युवाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ - Rajdhani Daily News
सप्तरीमा ७ संक्रमित थपिए, ७५ दिनमा संक्रमितको संख्या ७७ पुग्यो
राजधानी समाचारदाता - June 6, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । सप्तरीमा दिनहु कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढदो छ । पछिलो पटक शनिबार पनि ७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएको हो...
रासस - June 6, 2020 0
गलकोट । बागलुङ नगरपालिकाले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनको दुई विकल्प दिएको छ । सरकारले शुक्रबारदेखि तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीको उद्धार थालेपछि बागलुङ भित्रिनेले इच्छाअनुसारको क्वारेन्टिनमा...
नवलपुरको बालमैत्री नगरपालिकामै १६ बर्षीया सुत्केरीको मृत्यु
शोभा जिसी - June 6, 2020 0
नपलपुर । पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा १६ बर्षीया सुत्केरी आमाको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण निधन भएको छ । देवचुली नगरपालिका बालमैत्री नगरपालिका हो । देवचुली नगरपालिका...
राजेन्द्र ठगुन्ना - June 6, 2020 0
बर्दियामा एकैदिन २८ जना कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ४१ पुग्यो
सुदीप अधिकारी - June 6, 2020 0
बर्दिया । बर्दियामा शनिबार एकै पटक २८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बाँकेको भेरी अस्पतालमा गरिएको स्वाब परीक्षणका क्रममा २८ जनामा कोरोना...
सुभाष साह - June 6, 2020 0
काठमाडौं । हतार हतारमा एकीकरण गरिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा विवाद बढ्दै गएको छ । विवादकै कारण पार्टी स्ुस्त बन्न...
चार वर्षिय बालकको अपहरणपछि हत्या गरिएको आशंका
सप्तरी, राजविराज । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका २ अकबरपुरका ४ बर्षिया बालक सुजित यादवको अपहरण पश्चात हत्या गरिएको परिवारजनले दावी गरेका छन् । विहिबार दिउँसो...
आरडीटी परीक्षण नगर्न सुझाव : क्वारेन्टिनमा बसेकाको पीसीआर नगर्दा जोखिम बढ्दै
प्रशान्त वली - June 6, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका सबै नागरिकको आरटीपीसीआर परीक्षण नगर्ने भएको छ । तर, विज्ञहरूले भने भरपर्दो र विश्वसनीय भएकाले पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने...
सोती हत्या काण्ड : सबैको शव अंगभंग भएको अवस्थामा भेटिए
वीरबहादुर गिरी - June 6, 2020 0
जाजरकोट । पश्चिम रुकुमको सोती घटनामा मारिएका सबै युवाको शव क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएपछि घटना रहस्यमय बनेको छ । शवको प्रकृति हेर्दा उनीहरूलाई हत्या गरेर...
बृद्ध मानिस हराए
ललितपुर । काठमाडौं फर्पिङ नगरपालिका वडा नम्बर ७ कोपुका एक मानिस हराएका छन् । गएको जेठ १९ गते सोमबारदेखी आफ्नै घरबाट निस्किएका ६५ वर्षका...
कोरोना संक्रमणमा भारत इटली भन्दा अगाडी, दिनमा झण्डै दश हजार संक्रमित
एजेन्सी - June 6, 2020 0
नयाँदिल्ली । विश्वभरी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमणमा भारतले इटलीलाई पनि जितेको छ । विश्वमै धेरै संक्रमित भएका देशहरुको सूचीमा छैटौ अग्रपंक्तिमा रहेको इटलीलाई...
नयाँदिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बृद्धि हुदै गइरहेको छ । अघिल्ला दिनहरुमा भन्दा पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको...
नेपालले नोभेम्बरमा ताइपेई र अस्ट्रेलियासँग खेल्ने
काठमाडौं । एसियाली फुटबल कन्फेडेरेसनले कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भएको २०२२ मा कतारमा हुने फिफा विश्वकप र सन् २०२३ मा चीनमा हुने एसियन कपको...
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो कार्यसमितिले आफ्नो मातहतमा रहेका डोजाङ र विद्यालयमा प्रशिक्षण गर्ने तेक्वान्दो खेलाडीलाई सहयोग गरेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण...
लन्डन । जर्मन क्लब आरबी लाइपजिगका जर्मन युवा फरवार्ड टिमो वेर्नर इंग्लिस क्लब चेल्सीमा आउने पक्का भएको छ । वेर्नरलाई चेल्सीले पाँच वर्षका लागि...
महममारी, लकडाउन र मानवअधिकार
डा. टीकाराम पोखरेल - June 6, 2020 0
कोभिड–१९ का कारण विश्व आक्रान्त छ । नेपाल पनि अछुतो छैन । सुरुमा केही सुरक्षितजस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय संक्रमितहरू बढ्दै जाँदा खतरा बढेको...
जातीय विभेद किन ?
राजेन्द्रबहादुर सिंह - June 6, 2020 0
नश्ल र जातजातिमा आधारित विभेद २१औं शताब्दीसम्म पनि विकसित भनिएका समाज र राज्यलगायतमा व्याप्त रहनु समस्त मानवजातिको कलंक हो । जातीय विभेदजन्य घटना घट्नु...
जनजीविकामा गम्भीर ध्यान देऊ
कोरोना महामारीको अनिश्चिततासँगै देखिन थालेको विकराल समस्या समाधानका लागि यस आर्थिक वर्षको विकास बजेट जनजीविकाका कार्यक्रममा खर्च गरिए त्यसले देश र जनताको भलो हुन...
वर्षा लाग्यो काठमाडौंमा (फोटोफिचर)
द्वारिका काफ्ले - June 5, 2020 0
काठमाडौं । काठमाण्डौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण जनजीवन कष्टकर भएको छ । काठमाण्डौका प्रमुख सडक चिल्ला र सफा देखिए पनि...
Home प्रदेश प्रदेश १ भोजपुरका ३ युवाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
भोजपुरका ३ युवाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
By युवराज विष्ट
भोजपुर । कोरोना संक्रमित युवतीसँगै एउटै विमानमा आएका भोजपुरका एक युवकको कोरोना नूमना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । कतार एयरवेजको उडान नम्बर क्युआर ६५२ बाट चैत ४ मा आएका षडानन्द नगरपालिकाका एक युवकको कोरोना परीक्षण रिर्पोट नेगेटिभ आएको जिल्ला अस्पताल भोजपुरले जनाएको छ । उनी क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए ।
त्यस्तै भारत सुनौली भन्सार हुँदै आएका सोही ठाउँका अर्का युवकको पनि रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ । दुवैजना षडानन्द नगरपालिकाले दिंलास्थित हस्पिटलको भवनमा निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन् । विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको स्वाव परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । उनीहरुको स्वाव परीक्षणका लागि गत १९ गते बुधबार धरान पठाइएको थियो ।
यस्तै अरुण गाउँपालिकाका अर्का युवकको पनि रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ । कतारबाट आएका ती युवा होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकोमा ज्वरो बढेपछि थप उपचारका लागि भन्दै गत १५ गते धरान लगिएको थियो । उनको पनि विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ।
करणीको आरोपमा गाउँपालिकाका एक कर्मचारी पक्राउ
भगीरथ भण्डारी - June 6, 2020 0
इलाम । जबरजस्ती करणीको आरोपमा इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाका एक कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । माङसेबुङ गाउँपालिका ६ चिसोपानी पंचमी बजारका ५५ वर्षीय असिस्टेन सबइन्जिनियर...
उदयपुरमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु
ईश्वर तामाङ - June 5, 2020 0
उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ सेतिखोलामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा १ जनाको ज्यान गएको छ । बिहान पौने १० बजेको समयमा भिमफेदीबाट सेतिखोला तर्फ जाँदै गरेको...
मेयरले खनेको बाटो स्थानीले पुरे
विवेक विवश रेग्मी - June 5, 2020 0
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले करीब दुई हप्ता अगाडि खनेको बाटो स्थानीयबासीले पुरेका छन् । इटहरीको लविपुरदेखि तरहरासम्म बन्ने भनिएको बाटो वडा...
प्रदेश ४ रासस - June 6, 2020 0
जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालबाट १५ जनाले जिते कोरोना
प्रदेश २ सुजीतकुमार झा - June 6, 2020 0
जनकपुरधाम । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम अन्तर्गत रहेको कोरोना विशेष अस्पतालबाट १५ जनाले कोरोना जितेका छन् । गत जेष्ठ ९ गते कोरोना पुष्टि भएर अस्पतालमा...
दुबईबाट रित्तै हात फर्किएका भन्छन्, ‘आफ्नै देशको माटोमा टेक्न पायौँ, धेरै खुशी भएका छौँ’
प्रदेश ३ रमेश गिरी/रासस - June 6, 2020 0
भक्तपुर । राति ८ बजे मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ राधेराधेस्थित हेरिटेज बैंक्वेटको गेट अगाडि रोकियो नेपाली सेनाको गाडी । सेनाका पाँचवटा गाडीमध्ये एउटा गाडी यहाँ रोकियो...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - June 6, 2020 0
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - June 6, 2020 0
प्रदेश ५ शोभा जिसी - June 6, 2020 0
Editor-Picks सुभाष साह - June 6, 2020 0
Editor-Picks द्वारिका काफ्ले - June 5, 2020 0
सोती घटना : मृतकको सामुहिक हत्याको आशंका
Editor-Picks बीरबहादुर गिरी - June 5, 2020 0
जाजरकोट । बहुचर्चित पश्चिम रुकुमको सोेती घटनामा मारिएका सबै जनाको शवहरु रहस्यमय देखिएका छन् । घटनापछि भेरी नदीमा ६ जनाकै शव घाइते अबस्थामा फेला...
राजधानी समाचारदाता - June 6, 2020
रासस - June 6, 2020
शोभा जिसी - June 6, 2020
राजेन्द्र ठगुन्ना - June 6, 2020